Rarista & Soo celinta - Popular Jewelry
Maraakiibta Bilaashka ah ee Maraakiibta (Mareykanka)
Ku raaxayso maraakiibta caadiga ah ee heerka sare ah (USPS First Class) oo ah amarada $ 100 ama ka badan.
Macluumaadka Dhoofinta Guud
Fadlan u oggolow 3-5 maalmood oo shaqo oo ku saabsan habeynta iyo xaqiijinta. U oggolow 7-10 maalmood oo shaqo oo dheeri ah oo loogu talagalay gaarsiinta guriga.
Annagu mas'uul kama nihin wixii shixnad ah, la xado, ama waxyeello soo gaarto. Dhammaan shixnadaha waa caymis oo iibsaduhu wuxuu qaataa dhammaan mas'uuliyadaha sheegashada ee laga leeyahay shixnadaha rarka.
Sababo amni awgood, waxaan kaliya u rarnaa cinwaanka ku yaal goobta laga bixiyo.
Sababo amni awgood, ma diidi karno xirmo ama wax kama beddeleyno keenitaankiisa mar haddii lagu wareejiyo shirkadda side. Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho wixii macluumaad ah ee ku saabsan amar (cinwaanka dhoofinta / lacag bixinta, macluumaadka lacag bixinta, iwm.) isla markaaba info@popular.jewelry. Haddii amarkaaga si guul leh la joojiyo, waad soo gudbin kartaa amar cusub oo dib loo eegay.
Nidaamkeenu wuxuu soconayaa 15 maalmood kadib taariikhda rarka. Haddii 15 maalmood ay dhaaftay tan iyo markii aan rarnay xirmadaada, ma bixin karno lacag celin ama isweydaarsi.
Qaybaha loo yaqaan 'Custom desktop' sida magacyada loo yaqaan 'ringlines', oo siddo magacyada, iyo ilig iwm.) Lama soo celin karo loomana isticmaali doono sida kaydinta dukaanka. Shakhsi ahaaneed iyo wax ka beddelidda (sida. Xardhso jijimo, silsilad silsilad cabir ah) oo qayb ka ah ayaa waliba luminaya siyaasaddii soo noqoshada. Waanu ku soo ogeysiin doonaa ka hor waqtiga iibsashada haddii shay sidan lagu tilmaamo.
Waxyaabaha la soo celiyay waxay ku xiran yihiin khidmadda dib u soo celinta 15% oo laga jari doono lacagta soo celinta. Qiimaha rarka lama soo celin karo.
Si aad xaq ugu yeelatid soo laabashada, sheygaagu waa inuu noqdaa mid aan la adeegsan isla markaana isla xaaladdii laguugu soo diray. Baakadaha asalka ah waa in lagu soo daraa.
Lacagta (haddii ay habboon tahay)
Marka soo-celintaada la helo oo la kormeero, waxaan kuu soo diri doonnaa emayl si aan kuu ogeysiinno inaan helnay sheyga (yaasha). Waxaan sidoo kale kugu wargalin doonnaa oggolaanshaha ama diidmada soo celintaada.
Haddii soo celintaada la oggolaaday, soo celintaada waa la shaqeyn doonaa oo deynta ayaa si otomaatig ah loogu dabaqi doonaa kaarkaaga deynta (ama qaab kale oo lacag bixin ah) dhowr maalmood gudahood.
Lacagaha soo noqoshada ama maqan (haddii ay habboon tahay)
Haddii aadan wali helin wax lacag celin ah toddobaad gudihii ogeysiiska xaqiijinta soo celinta, fadlan la xiriir bangigaaga iyo shirkadda kaarka deynta / PayPal. Ka shaqeynta waqtiga lacag celintu way dheeraan kartaa; waxay qaadan kartaa xoogaa waqti ah kahor soo celinta lacagtaada.
Haddii aad raacday hanaankan oo aan wali lagu wargalin ama aan helin soo-celintaada, fadlan nagala soo xiriirnowjewelrycorp@gmail.com.
Alaabada iibka (haddii ay habboon tahay)
Kaliya waxyaabaha lagu iibsaday qiimaha dukaannada caadiga ah waa la soo celin karaa. Alaabada iibka ah lama soo celin karo.
bedasha (haddii ay habboon tahay)
Waxaan bedeleynaa walxaha kaliya haddii ay cilladaysan yihiin ama waxyeelloobeen. Haddii aad u baahan tahay beddel sax ah, noogu soo dir emayl info@popular.jewelry una soo dir sheygaaga Wadada 255B New York, New York US 10013. Is-beddelada ma ku hoos jiraan 10% lacagta soo celinta.
Haddii sheyga lagu calaamadeeyay hadiyad markii si toos ah laguugu soo iibiyey ama laguu diray, waxaa lagu siinayaa dhibco buuxa qiimaha soo laabashadaada. Marka sheyga soo celinta la helo, shahaadada hadiyadda ayaa boostada laguugu soo diri doonaa.
Haddii shaygu aanu calaamad u ahayn hadiyad markii la iibsanayay, ama haddii hibada uu lahaa amar loo diray asaga ama ayada iyadu inay kuu soo qaybinayso, waxaan u soo celin doonaa lacagta hibada oo isagu / iyadu waxay mas'uul ka noqon doonaan maaraynta ee shahaadada amaahda / hadiyadda.
Si aad u soo celiso badeecadaada, fadlan nagala soo xiriir info@popular.jewelry oo leh lambarka dalabka iyo "KU DIIWAAN" maaddada. In kasta oo aan loo baahnayn haddana waad ku dari kartaa sababta dib ugu noqoshada (waxaan ku dadaalnaa inaan horumarinno howlaheenna iyo soo-jeedinteena waa la soo dhaweynayaa!)
Mar haddii soo celinta la oggolaado, dejiso ku noqoshada cinwaanka soo socda:
255 Kanaalka Waddada Waddo B
Waxaad mas'uul ka noqon doontaa qarashka dhoofinta ee la aruuriyay soo laabashada. Qiimaha dhoofinta waqtiga la iibsanayo lama soo celin karo. Qiimaha dhoofinta soo celinta ayaa laga goynayaa soo celintaada.
Waqtiga ay ku qaadaneyso sheyga lacag soo celinta / isweydaarsiga ayaa kala duwan kuna saleysan meesha aad degan tahay. Waxaan ku siin doonnaa macluumaadka raadraaca waqtiga rarka (badiyaa e-mayl ahaan) haddii ay suurtagal tahay.
Haddii aad alaab u direyso qiimo ka badan $ 75, tixgeli inaad isticmaasho adeegga maraakiibta la raaci karo iyo caymiska iibsiga xirmadaada. Dammaanad kama qaadi karno inaan heli doonno soo noqoshadaada.